Sida Loo Maamulo Baraha Bulshada ee Casriga ah | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/Sida Loo Maamulo La Wareegida Warbaahinta Bulshada ee Smart
Sida Loo Maamulo La Wareegida Warbaahinta Bulshada ee Smart
Weligaa ma ku fikirtay in aad la wareegto warbaahinta bulshada?
La wareegitaanka warbaahinta bulshada waa marka aad siiso mudnaanta soo dhejinta qofka xiisaynaya, sida saameyne, khabiir, ama xirfadle. In kasta oo la wareegistu ay caan ku yihiin Instagram iyo Snapchat, waxaa lagu martigelin karaa goob kasta oo bulsho.
Hagahan ayaa dabooli doona sida summadaadu uga faa'iidaysan karto la wareegidda warbaahinta bulshada. Waxay sidoo kale ku tusin doontaa sida loo maamulo la wareegiddaada, tallaabo-tallaabo. Oo waxay ku siin dhiirigelin ka qabsashada kale ee warbaahinta bulshada ee guuleysta.
Maxaad u maamulaysaa la wareegidda warbaahinta bulshada?
Waxaa jira sababo badan oo martigelinaya la wareegidda warbaahinta bulshada. Waxay kaa caawin karaan inaad kordhiso ka warqabka astaantaada, furto dhagaystayaal cusub, ka qaybgeliso kuwa raacsan hadda, iyo in ka badan.
Kordhinta soo -gaadhista
Algorithms-yada bulshadu badanaa way isbedelaan, laakiin sharciga guud ayaa ah ka-qaybgalka badan ee boostadaadu hesho, waxay u badan tahay inay dadka kale arki doonaan. Haddii aad ku dhufatid macro-saamayn dhegaystayaal badan ama saameyn yar oo saldhig u go'an, korodhka soo-gaadhista waxay koontadaada u keeni kartaa ka-qaybgal, iib, iyo taageerayaal badan.
Nooca moodada akhlaaqda leh ee Everlane waxay la midowday tifaftiraha quruxda Teen Vogue iyo stylist Michelle Li talo khabiirkeeda sida loo qaabeeyo duntooda.
Qoraal ay wadaageen Michelle Li (@himichelleli)
Hel taageerayaal cusub
Mid ka mid ah faa'iidooyinka aasaasiga ah ee korodhka soo-gaadhista waa taageerayaasha cusub.
Haddii aad heli karto martigeliyaha la wareegidda oo kula hadlaya tirakoobka bartilmaameedkaaga, fursadaha waa sarreeyaa waxay xiisayn doonaan inay wax badan ka maqlaan astaantaada. Laakin la wareegistu waxay sidoo kale noqon kartaa hab wax ku ool ah oo loogu guuri karo suuqyo cusub.
Dukaan ka furanaya magaalo cusub? Daahfurka khadka dharka ragga? Soo hel martigeliyaha awooda suuqa bartilmaameedkaaga cusub oo ku bari kara taageerayaal cusub oo mustaqbalka ah.
Si loogu dhawaaqo bixinta soo dejinta bilaashka ah ee caalamiga ah ee dalabka, Dib-u-habaynta waxay taabatay saamaynta Ingiriisi Lucy Williams inay la wareegto Sheekooyinkeeda Instagram oo ay u qaabeeyaan qaybahooda London.
Dhis astaanta astaanta
Martigaliyayaasha la wareegidda waxay saameyn halo ah u yeelan karaan summadaada. Haddii saameeyay ay ku kalsoonaadaan dhagaystayaashooda, codkooda kalsoonida waxay wax weyn u tari kartaa kalsoonida sumaddaada.
Laakin ha u malayn in la wareegida ay tahay taageero adag. Martigaliyayaasha la wareegida waxay tusi karaan dhinac shakhsi ama anshax dheeraad ah sumaddaada.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad horumariso dhaqamadaada waara, tusaale ahaan, hel martigeliyaha u doodaha caanka ah ee deegaanka. Ma doonaysaa inaad caddayso in alaabtaada ay xidhan karaan dadka da' kasta leh iyo noocyada jidhka? Soo hel martigeliyaha la wareegidda ee leh da'aha kala duwan iyo noocyada jirka.
La wareegitaankeeda Twitter-ka, Mastercard waxa uu waydiiyay tababarayaasheeda xagaaga waxa ay xiiseeyaan. Ololuhu waxa uu awooday in uu kor u qaado ololaha #qiimaha-xagaaga ee sumadda, iyada oo la wadaagayo dhinac shakhsi ah sidoo kale.
Shaqaale kafiil ahaan, Esha waxay ku lug leedahay dhacdooyin caalami ah oo qabow sida Abaalmarinta GRAMMY! Laakiin waxaa murugo leh, tababarkeedu kuma jiri doono ka qaybgalka Koobka Adduunka ee Rugby ee soo socda 😢 pic.twitter.com/qNDocEbfBd
- Waxaan nahay Mastercard (@wearemastercard) Luulyo 24, 2019
La wadaag aragtiyo kala duwan
Aragtida gaarka ah waxay la jaanqaadi kartaa taageereyaal kala duwan. Maamulayaasha warbaahinta bulshadu waa inay had iyo jeer ka shaqeeyaan inay ku daraan oo ay ku xisaabtamaan aragtiyo kala duwan, iyo la wareegidda waxay caawin kartaa buuxinta daldaloolada ama kor u qaadida codadka qaarkood.
Samee xisaab xidhka warbaahinta bulshada oo arag haddii nuxurkaagu si dhab ah uga tarjumayo dhagaystayaashaada, macaamiishaada, ama shaqaalahaaga. Haddii aysan taasi dhicin, tixgeli la wareegidda warbaahinta bulshada si ay u noqoto qaab lagu soo bandhigo wejiyo, fikrado, iyo khibrado cusub.
Summada safarka ee Washington Post ee By The Way ayaa ka soo xigtay 50 wariyeyaal maxalli ah iyo qoraayaal meelo adduunka oo dhan ah si ay ula wareegaan Sheekooyinka Instagram-ka. Ku noqoshada maxali ah ee macnaha safarka waxay amaahinaysaa runnimada iyo sidoo kale kala duwanaanshaha.
Aragtida Kanchan Koya sida baayooloji molecular-ka/hooyada ayaa la wareegtay @BuzzfeedTasty iyada oo wadata talooyin ay kaliya bixin karto.
Ka faa'iidayso dhacdooyinka gaarka ah
Haddi aad bilaabayso olole cusub ama aad maalgalinayso dhacdo, la wareegida ayaa kaa caawin karta summadaada in ay ka faa'iidaystaan ​​wakhtiga warbaahinta bulshada. Dhacdooyinka gaarka ahina waxay inta badan keenaan waxyaabo madadaalo leh oo summadaada iyo la wareegidda martigeliyahaagu ay ka heli karaan hal abuur.
Haddii ay tahay dhacdo caan ah, hubso inaad isticmaasho hashtagyada khuseeya kuwaas oo kaa caawin doona inaad la kulanto soo-gaadhis dheeraad ah.
Sidoo kale isha ku hay fasaxyada warbaahinta bulshada. Haddii aad abuurto badeecooyin bisadaha oo aad qorshaynayso inaad martigeliso la wareegidda saamaynaha xayawaanka rabaayada ah, #InternationalCatDay waxay u noqon kartaa maalin u wanaagsan.
Red Bull iyo Red Bull Photography ayaa iska kaashaday intii lagu guda jiray munaasabada #RedBowlRippers iyadoo ay la wareegeen sawir qaade Teddy Morellec. Marka laga soo tago dhacdadeeda rippin', la wareegidda waxay la soo baxday hashtag #Maalinta Sawir-qaadista Adduunka.
Qoraal uu wadaagay Teddy Morellec (@teddymorellec)
Sida loo maamulo la wareegida warbaahinta bulshada 5 tillaabo
Soo hel abuurayaasha saxda ah
Deji xuduudaha la wareegidda
Kor u qaad la wareegidda
Raad raac guushaada
La wareegida warbaahinta bulshada maaha inay noqoto mid adag. Raac tillaabooyinkan si aad u hubiso in la wareegiddaadu hubinayso dhammaan sanduuqyada saxda ah.
Waxaan ku soo darnay tusaalooyin si aan u dhiirigelinno fikradaha la wareegitaanka warbaahinta bulshada inta lagu jiro jidka.
1. qeex hadafyadaada
Haddii aad u maleyneyso in la wareegidda warbaahinta bulshada ay ku habboon tahay astaantaada, ku billow abuurista qorshe. Maxaad rajaynaysaa inaad ku guulaysato la wareegidda? Sideed u yeeli doontaa? Goormaad sameyn doontaa? Sideed u qeexi doontaa guusha?
Hab macquul ah oo looga jawaabo su'aalahan adigoo isticmaalaya qoraalka SMART:
Khaas ahaan: Si cad u sheeg ujeedadaada ololaha.
La Cabbiro: Sharaxaad ka bixi cabirrada aad isticmaali doonto si aad ula socoto waxqabadka.
La heli karo: Noqo mid macquul ah. Naftaada ha u dhigin guuldarro.
khuseeya Hubi in la wareegiddu ay ku xidhan tahay yoolalka ganacsi ee ballaadhan.
Waqti ku habboon: Samee waqtiyada kama dambaysta ah ee u shaqeeya kooxdaada iyo jadwalka bulshada.
Markaad hadafyadaada u soo jiido, waxaad noqon doontaa meel wanaagsan oo aad kaga jawaabto su'aalaha la wareegidda warbaahinta bulshada ee muhiimka ah, sida:
Waa maxay kanaalada aad u isticmaali doonto la wareegiddaada?
la wareegiddaadu mawduuc ma yeelan doontaa?
Waa maxay nooca abuurayaasha noqon doona mid ku habboon?
2. Raadi abuurayaasha saxda ah
Hadafkaaga la qeexay waxaad u baahan doontaa inaad hesho dad kaa caawin kara inaad gaarto.
La-hawlgalayaasha saamaynta leh waa doorasho caan ah maadaama abuurayaasha wanaagsani ay yeelan doonaan dhegaystayaal waaweyn oo daacad ah.
Haddii aad jidkan marayso, hubi si aad u aragto cidda ay hore ula soo shaqeeyeen. U fiirso ka-qaybgalka ololayaashooda oo baro shakhsiyadooda.
tip Pro: U fiirso waxyaabaha laga yaabo inay calaamado casaan ah u noqdaan sumaddaada, sida shuraako hore oo lala yeesho tartame ama kor u qaadida aragtiyada shirkadu aanay u taagnayn.
Ma aha in dhammaan la wareegitaanka warbaahinta bulshada ay u baahan yihiin kuwa wax saameeya, in kastoo. Tixgeli inaad la-shaqayso dadka leh aragti gaar ah oo xog-ogaalnimo leh.
Tusaale ahaan, usbuuc kasta barta Instagram @newyorkerphoto waxay ku wareejisaa iftiinka sawir qaade kale. Sawir qaadayaashaan waxaa laga yaabaa inaysan haysanin daawadayaal badan, laakiin waxay abuuraan shaqo ay dhagaystayaasha New Yorker ka heli doonaan xiiso.
Qoraal uu wadaagay Sawirka New Yorker (@newyorkerphoto)
Si kor loogu qaado bandhigyada cusub Xarunta Kennedy, xarunta fanka waxay bixisaa safaro muuqaalo gadaashiisa ah oo ay xiddigaheeda kala wareegayso.
Intii lagu jiray Snapchat, Abaalmarinta Tony Awards waxay ku garaacday Simba oo ka socota King Lion si ay ugu martigeliso munaasabadda baraha bulshada.
Ama waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay inaad tusto dadka ka dambeeya astaantaada. La wareegidda shaqaaluhu waxay noqon kartaa hab wanaagsan oo lagu muujiyo khibradaada guriga, adeegga macaamiisha, qiyamka shirkadda, iyo in ka badan.
Ganacsi daanyeer yar waa ciyaar cadaalad ah, sidoo kale. Kaliya weydii ilaaliyaha gorilla ee Durrell Wildlife Conservation Trust & Jersey Zoo.
Qoraal uu wadaagay Durrell Duurjoogta (@durrell_jerseyzoo)
3. Samee cabbirada la wareegidda
Waa kan halka aad faahfaahinta ugu sii dhex geli doonto
Kahor intaanan aad u fogaan, waxaa muhiim ah in la kala saaro cidda abuuraysa oo soo dhejin doonta waxa ku jira. Xaalado badan martigeliyaha la wareegidda ayaa lagu soo bandhigay nuxurka, taas oo macnaheedu yahay in xakamaynta lagu hayn karo gudaha kooxda warbaahinta bulshada ee sumaddaada.
Haddii martigeliyahaagu uu abuurayo nuxurka, go'aami jadwalka dib u eegista iyo dhajinta. Waad dhiibi kartaa gelitaanka akoonkaaga, ama waxaad waydiisan kartaa inay ku siiyaan oo ku dhejiyaan magacooda - ilaa la wareegitaankaagu ku jiro Snapchat, markaa waa inaad wareejisaa gelitaanka.
Haddii aad leedahay astaan ​​ama hab habeedka warbaahinta bulshada, iska hubi inaad siiso martidaada.
Waxyaabaha kale ee ay tahay inaad ka hadasho waxaa ka mid ah:
Goobahee ayaa lagu qabanayaa la wareegidda? (Instagram, Snapchat, Facebook, LinkedIn, Twitter, iwm.)
Goorma iyo intee in le'eg ayay la wareegiddu soconaysaa? Qayb ka mid ah cabbirada sida goobta daawadayaasha saamaynta ku leh iyo wakhtiga maalinta ay helaan ka-qaybgalka ugu badan.
Waa maxay nooca warbaahinta la wadaagi doona? Sawiro, Boomerangs, muuqaalo, iwm. Martigeliyaha mas'uul ma ka yahay qorista nuqulka sidoo kale?
La wareegidda ma ku jiri doontaa qoraallo, sheekooyin, IGTV, ama fiidiyowyada YouTube?
Immisa qoraal ayaa la wareegidda ku jiri doona?
La wareegiddu ma horumarinaysaa hashtag? Ma ku jirtaa hashtag kale sidoo kale?
Ma laga yaabaa inay ku jiraan waxyaabo kale sida istiikarrada, filtarrada, ama doorashada? Xiriirinta sidoo kale ma lagu dari doonaa?
Iyadoo ku xiran goobta aad dooratay, faahfaahinta qaar ayaa ka muhiimsan kuwa kale. Tusaale ahaan, Irene Kim's Seoul Fashion Week ee Snapchat la wareegida Vogue waxay u baahday xoogaa qorshayn saadka ah, laakiin waxa ku jira ayaa ahaa mid ka baxsan-ka-xidhka marka loo eego kuwa la safeeyey.
Dhanka kale ololaha la wareegida kanaalka badan ee North Face, kaas oo ay ka mid ahaayeen ciyaartoy ski, ayaa u baahnaan lahaa qorshayn iyo dood badan.
Ma rabtaa inaad ka hesho dhammaan ficillada Red Bull Cold Rush 2016 ee Revelstoke Mountain Resort? Kooxda Skiers Tatum Monod, Angel…
Waxaa dhejiyay The North Face Isniintii, Febraayo 1, 2016
4. Kor u qaad la wareegidda
Marka aad qorsheysato in aad la wareegto, waxa fiican in aad dadka ogeysiiso.
Haddii aad shaqaaleysiisey kartida saamaynta sare leh, weydii inay kor u qaadaan la wareegidda akoonkooda gaarka ah. Iyada oo ku xidhan waxa aad ku heshiisay, waxay ku majaajiloodaan karaan waxa ku jira ka hor iyo inta lagu guda jiro la wareegida goobaha bulshada ee cayiman. Hubi inay ku daraan gacantaada iyo/ama hashtag-gaaga marka ay sameeyaan.
Qoraal uu wadaagay alexandra daddario (@alexandradaddario)
Sababtoo ah la wareegidda ayaa ka dhacaysa Instagram macnaheedu maaha inaad kaliya ku xayeysiiso halkaas. U qaado Twitter, Snapchat, LinkedIn iyo kanaalada u muuqda inay khuseeyaan si aad u ogeysiiso dhagaystayaashaada.
Haddii aad dirto warside ama aad maamusho blog, ka fiirso inaad sidoo kale halkaas kula wadaagto.
Haddii aad horay ula wareegid ka xanaajisay, iska hubi inaad ku darto taariikhda iyo wakhtiga ay tahay inay dhegaystaan-gaar ahaan haddii la wareegiddaadu tahay Sheeko lama filaan ah ama Snap.
Haddii aysan ahayn waqti xasaasi ah, Instagram-ka waxaad sidoo kale muujin kartaa la wareegidda. Haddii ay ku jirto Snapchat, iska hubi inaad qaado shaashado, iyo muuqaal aad ku dhejin karto YouTube ama meel kale.
Lasoco berrito la wareegidda Twitter-ka interneedka xagaaga ee Singapore! pic.twitter.com/8mwIj7VE0l
- Waxaan nahay Mastercard (@wearemastercard) Luulyo 23, 2019
Qoraal ay wadaageen Vermont Womenpreneurs (@vtwomenpreneurs)
5. Raad raac guushaada
Ma jiro la wareegitaanka warbaahinta bulshada oo dhammaystiran iyada oo aan dib loo eegin waxqabadkeeda. Qiyaaso kala duwan ayaa ka muhiimsan kuwa kale, iyadoo ku xiran hadafyadaada la wareegidda.
Isticmaal qalabyada falanqaynta ee aad gacanta ku hayso (inta badan aaladaha waxay bixiyaan qiyaas ganacsiyada) si aad u cabbirto kobaca raacayaasha, heerarka ka qaybgalka, aragtida, guji-riixyada, iyo in ka badan.
Haddii martigeliyahaagu uu soo dhejiyo macluumaadka akoonadooda, weydii inay sidoo kale wadaagaan cabbirkooda.
Hubi inaad diiwaan geliso guushaada, gaar ahaan marka ay timaaddo macluumaadka dhacaya. Wax ka baro waxa shaqeeyay iyo waxa aan shaqayn si markaas ula wareegida warbaahinta bulshada ee xigta ay u noqoto mid guulo badan
Isticmaal Hootsuite si aad u maamusho la wareegiddaada warbaahinta bulshada ee soo socota. Ku daabac dhammaan kanaalada bulshada ee waaweyn isla dashboardka, ka jawaab faallooyinka iyo fariimaha, oo raad raac guusha ololahaaga. Isku day bilaash maanta.
Sida loogu daro Youtube Video Gallery Boggaga WordPress
Sida loo daawado dhacdada Apple ee 2019 iPhone